Vamwe Varidzi veAirPod Vanotaura Mhosva dzeBhatiri Matambudziko | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | IPhone zvishongedzo
Izvo hazvifanire kushamisika kana mudziyo uchangobva kurova pamusika uchidaro nezvimwe zvinetswa. Chinhu chekupedzisira chinonakidza chatinogona kutenga kare ndeichi AirPods, Apple's wireless mahedhifoni ayo auya neakawandisa ehunyanzvi mapoinzi, senge W1 chip uye bhokisi rekuchaja remahedhifoni. Asi ivo vauyawo nedambudziko, zvinoenderana nezvakataurwa nevamwe varidzi vekutanga veAirPods.
Iyo AirPods iri mumaoko evashandisi vekutanga kubva Zvita 19-20. Ikozvino, inopfuura vhiki gare gare uye mushure menguva umo maitiro emabhatiri avo atogona kuongororwa vashandisi vari kugunun'una kuti bhokisi rekuchaja harichengetedze maawa makumi maviri nemana kuti vaCupertino vakavimbisa kubva munaGunyana, pavakaunza mahedhifoni.
Bhokisi reAirPods harina mubhadharo waro
Bhokisi rinoshanda seinotevera: iyo inofanirwa kuzvichengetera yega maawa makumi maviri nemana ekubhadharisa kune ese mahedhiyo. Kana mahedhifoni akaiswa mauri, iro bhokisi rinoendesa muripo kune mahedhifoni uye panguva iyoyo ndipo panofanira kutanga maawa makumi maviri nemana kuburuka. Kana mahedhifoni ari kunze, iro bhokisi rinofanira kurasikirwa nemutero mudiki, chimwe chinhu senge iyo chero smartphone inorasikirwa kana iri nechidzitiro chakavharika uye mune yemhepo ndege, ndokuti, hapana kana chinhu. Izvi ndizvo chaizvo izvo bhokisi reAirPods risingakwanise kuita zvinoenderana nevashandisi vari kugunun'una nezvedambudziko iri.
Vashandisi vari kusangana nedambudziko iri vanovimbisa kuti iyo AirPods bhokisi inodonha kusvika kubvisa 40% mumaawa mashoma, kunyangwe maAirPod ari 100% akachaja uye kushandiswa kweBluetooth kushoma. Ichi chinhu chisingafanirwe kuitika uye panguva ino hazvizivikanwe kuti sei zvichizoitika.
Mushandisi weReddit chokwadi enda kuApple Store, chinja maAirPod uye uone kuti dambudziko rinonyangarika sei, izvo zvisingabatsire kuziva zviri kuitika. Ini pachangu handikwanise kuziva kuti chii chiri dambudziko reAirPod nebhokisi ravo rekuchaja kana, asi Ini handigone kudzora mukana wekuti iri dambudziko re software yakabatana neBluetooth. Ndinotaura izvi nekuti vhiki rino chete ndanga ndiine dambudziko rakafanana neangu iPhone 7 Plus pakuteerera mimhanzi ine mahedhifoni eBluetooth umo pandakaona kudonha kwakaita bhatiri re iPhone kubva pa100% kusvika pa20% mumaawa maviri, chimwe chinhu chakandibata zvakawanda. kutarisisa.
Chero zvazvingaitika, iwo eCupertino, senguva dzose, Ivo havasi kunyunyuta kutsiva zvishandiso izvo zviri kukonzera matambudziko. Chokwadi munguva pfupi inotevera tichava neshoko kana mhinduro yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Vamwe varidzi veAirPod vanogunun'una nenyaya dzemabhatiri
Izvo zvigadzirwa Apple zvakasiya kumashure mu2016